Wasiir saaxiib la ahaa Madaxweynihii hore ee Al Jazaa'ir oo Carona udhintay.
Sunday July 19, 2020 - 16:30:34 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Mid kamida wasiiradii ugu saameynta badnaa dalka Aljazaa'ir ayaa si lama filaan ah ugu dhax geeriyooday xabsi uu ku xirnaa sida ay xaqiijiyeen ehelkiisa.
sawirka wasiirka dhintay
Muusa Bin Xamaadi oo ahaa wasiirkii isgaarsiinta dowladdii Cabdi Caziiz Botafaliiqa ayaa ugeeriyooda cudurka dilaaga Carona Virus xilli uu ku xirnaa xabsi amnigiisa si aad ah loo ilaaliyo oo kuyaal magaalada caasimadd ah ee Aljazaa'ir.
Wasiirka dhintay ayaa jeelka loo dhaadhiciyay bishii september ee sanaddii 2019 xilligaas oo kacdoon lagu riday nidaamkii Botafaliiqa, Muusa Bin Xamaadi ayaa ku eedaysnaa musuq maasuq iyo xadidda hanti dowladeed.
Maxkamadda dabmiyada Aljazaa'ir ayaa qorshaynaysay in wasiirka dhintay iyo kaaliyaashii Botafaliiqa lagu qaado dacwado dhowr ah oo ku saabsan musuq maasuq iyo tacadiyo ka dhan ah shacabkii dhigayay kacdoonadii ka dhanka ahaa maamulkii hore.
Wararka ayaa intaas ku daraya in afartii bishan July uu cudurka Carona asiibay Muuse Bin Xamaadi balse markii dambe uu udhintay, wadanka aljazaa'ir ee dhaca waqooyiga qaaradda Afrika ayaa safka hore uga jira wadamada ladhiban caabuqa covid19 ee dhaca qaaradda Afrika.
R/wasaarihii hore ee dalka Suudaan oo geeriyooday.
Gobolka Georgia oo rasmi ahaan ugu dhawaaqay in uu Biden guulaystay.
Rubac Malyuun qof oo dalka Mareykanka ugu dhintay Cudurka Carona Virus.
Sarkaal gacan saar lalahaa Dowladda Kenya oo lagu dilay Mandheera.
Nin 50 sano R/wasaare ka ahaa dal Carbeed oo geeriyooday.
Saldhigga ciidanka Itoobiya ee degmada Garbahaarey oo laweeraray.